Fitsaboana Coronavirus eto Madagasikara Miaraka ampiasaina ny Hydroxychloroquine sy CVO ?
Tsy nampiasana ny CVO ireo olona roa namoy ny ainy noho ny coronavirus, raha ny seraseram-panjakana.
Ny ankamaroan’ireo voa dia nambaran’ny Filoham-pirenena, fa tsy nisotro io tambavy io. Tany am-piandohan’ny coronavirus, fony mbola tsy nisy ny CVO anefa, dia nambaran’ny fanjakana fa efa manana ny “protocole” manokana na fomba fitsaboana I Madagasikara. Tsy nambara mazava io “protocole”, saingy nisy resaka niely fa mifototra amin’ny hydroxychloroquine. Ny 8 aprily rahateo, dia nisy ny fanolorana fanafody Hydroxychloroquine miisa 6000 boaty avy amin’ny Vondron’orinasa Axian ho an’ny fanjakana nambara fa afaka hitsaboana marary miisa eo amin'ny 2000. Ny Filoha Tale Jeneralin'ity vondrona ity Atoa Hassanein Hiridjee mihitsy no nanolotra izany tamin’ny Filoha Rajoelina tao amin'ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra. Natokana hitsaboana ireo tratran'ny coronavirus ireo fanafody ireo, araka ny fampitam-baovao tamin’izany. Efa nisy rahateo ireo marary sitrana teto na mbola tsy nisy aza ny CVO. Iza marina izany ankehitriny no fitsaboana tena ampiasaina? Afa-miaraka ve ilay Hydroxychloroquine sy ny CVO sa najanona tanteraka ilay fitsaboana voalohany? Ankehitriny, dia mihamaro ireo voa, saingy mitsitaitaika ny fahasitranana, ka hirariana mba tena hahomby ny fanafody sy ny fitsaboana.